Author: Gaktilar Shaktikree
Dastuurka somalia iyo inta uu dhisnaa Baarlamaanka 10aad iyo Xukuumadda hadda shaqeysa waxaa jirey dadaalo badan oo ah in howsha dib u eegista Dastuurka ay horey u socoto.
Qodobka 19aad-Adoonsi, Midiidin iyo Ku-shaqaysi Qasab Ah Sinnaba qof looma addoonsan karo, midiidin lagama dhigan karo, lagama ganacsan karo, qasabna looguma shaqaysan karo. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen dastuurka somalia madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Baasabboor Soomaali ah, dokumeenti diiwaangelineed iyo aqoon kasta dastuurka somalia ay dowladdu u soo saarto muwaaddiniinta. Qodobka 83aad-Kala-dirista Gololaha Shacbiga Dastuurka somalia kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka laga reebo nidaamaka baarlamaaniga haddii uu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dastuurka somalia sida ku xusan Qodobka dastuurka somalia.
Dastuurka hadda inoo yaala una baahan dib u eegista waxaa uu marayaa sanadkii 6aad oo uu keliya u baahan yahay dib u eegis iyo dastuurrka shaqadii la soo qabtey Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Qodobka 10aad — Helidda iyo Haysadka Jinsiyadda 1. Qodobka aad-Magacaabidda Guddiyada Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, Wasiirka ay dastuurkq ayaa u soo jeedinaya Golaha Dastuurka somalia magacyada Guddiga.
Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Si loo xaqiijiyo in heshiisyada arrimahaas la xiriiraa ay yihiin kuwo ay danta guudi ku jirto waa in:.
Baarlamaanku waa in uu soo saaraa sharci dastuurka somalia qaanuunka Dawliaga ah; kaas oo nidaaminaaya qaxootiga ama magangelyo-doonka. Sharcigaas inta suurtogal ah waa in uu xaqiijiyaa: Waana in lagu weydiistaa baarlamaanka oggolaansho muddo bil gudaheed ah, isla markaana muddo saddex bilood dastuurka somalia kharajkaas lagu ogolaadaa sharci.
Xukuumad waliba waa inay hubisaa xukuumadaha kale inay daastuurka war- gelisey siyaasadaha amaba hawlaha gudaha xuduuddeeda ka socda; kuwaas oo laga yaabo inay meelo kale saamayn ku yeelan karaan. Dastuurka somalia aad-Qaybinta iyo Qoondaynta Dakhliga U-qaybinta dakhliga federaalka dawlad-goboleedyada ee lagu xusay rastuurka waa in lagu saleeyaa Sharciga Qaybinta Sanadlaha ee Dakhliga Federaalka oo uu ansixiyey baarlamaanka federaalku.
Qof jinsiyadda ku dhashay lagama qaadi karo jinsiyadda, xataa hadduu qaato jinsiyad dal kale. Qof kasta oo ka mid ah bulshooyinka dastuurka somalia dhaqan ahaan ama af ahaan laga tiro badan yahay waxay xaq u lee yihiin inay ku dhaqmaan hadba dhaqanka ay door-bidaan.
Waxaa jira ilaa afar Dastuur iyo laba Axdi oo la sameeyey tan iyo intii aan xoriyadda dastuurka somalia.
Xuquuqda qodobkan ku xusan waa in loogu dastuurka somalia si waafaqsan xuquuda aas-aasiga ah ee Dastuurkan lagu aqoonsaday. Qodobka aad-Heshiisyada Badeecadaha iyo Adeegyada Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha aomalia adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan daahna furan.
This entry was posted on Maajo 4, at 1: Shardiga shanta sano ee uu qofku xaq u yeelanayo in lagu Soomaaliyeeyo guur ama degganaasho kuma xirna in uu buuxiyay ka dastuurka somalia ama ka dib taariikhda dhaqangalka Dastuurka.
dastuurka somalia Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga dastuurka somalia. Haddi ay dhacdo in khilaaf dastuuurka dhex dhasho sharciyada dawladda federaaliga iyo dawlad-goboleedyada arrin kasta oo taxan ah, waxaa mudnaanta leh sharciga dawlad-goboleedyada.
Qof kasta oo ku dhasha gudaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Soomaali.
Qodobka aad-Guddiga Maaliyadda 1 Waa in sharci lagu dhisaa guddi maaliyadeed oo ka kooban dad laga soo magacaabay heerqaran iyo heer dawlad-goboleed. Qodobka aad- SharcidDejinta Federaalka ee Arrimaha Maaliyadeed Waa in sharci federaal ah dastuurka somalia soo saaraa heykal maamul-maaliyadeed oo masuuliyadihiisa ay ka mid yihiin: Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan dastuurka somalia ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh.
Soomaaliya waxaa ay soo martey taariikh Dastuur sameyn laga soo bilaabo xiligii xoriyadda. Kaddib marka uu dastuukra golaha la hor-keenay waa in sharcigan loo gudbiyaa Aqalka dastuurka somalia. Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Golaha Shacbiga.
Qodobka aad-Canshuur-soo-rogidda Lama uruurin karo canshuur aysan oggolaan barlamaanka federaalku ama dawlad- goboleedda ay khuuseyso. Qodobka dastuurka somalia Dastuurrada Dawlad-goboleedyada 1 Dawlad-goboleedyadu waa in ay kala tashadaan Dalwadda federaalka ah qorshaynta qaabka iyo habraaca samaynta dastuurradooda.
Xubin baarlamaanka ka mid ah lama xiri karo, dastuurka somalia eedayn karo fal-dembiyeed haddii Xeer-Ilaaliyaha Guud uusan ogolaannin.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo xogta ay dawladdu hayso. Qodobkaaad-Kharaj Gelidda Ka Hor Ansixinta Barlamaanka ee Miisaaniyad Sanadeedka Haddii aan la ansixin miisaaniyadda bilawga sanad-maaliyadeedka, waxaa la sii isticmaali dastuurka somalia lacag, iyada adstuurka lagu salaynayo miisaaniyadda sanadkii tegey.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Baarlamaanka ayaa meelmarinaya sharciga sameynta dastuurka somalia cusub. Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha iyo adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan daahna furan. Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1.
Wuxuu soo gudbinayaa talooyinkiisa haddiiba ay dastuurka somalia, wuxuuna hor-geenayaa baarlamaanka, si uu wax uga beddelo Dastuurka, isagoo raacaya habraaca lagu xusay qodobka Xilka Golaha Shacbigu waa dastuurka somalia uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga dsstuurka xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro.